Akụkọ - Okwu Mmalite Fiber Glass
Okwu Mmalite Fiber Glass
Ajị anụ bụ ụdị eriri ọkụ. Ọ na-eji ájá quartz, okwute okwute, dolomite na mmanụ ndị ọzọ dị ka ihe ndị bụ isi, jikọtara ya na ụfọdụ ntụ ntụ, borax na akụrụngwa kemịkal ndị ọzọ ka ọ gbaze n'ime iko. N'ọnọdụ gbazere, a na-atụba ya n'ime eriri mara mma site n'ike ike na ọkpọ. A na-eji eriri na eriri eriri akụkụ atọ ma na-ejikọ ibe ha, na-egosi ọtụtụ obere oghere. Enwere ike iwere oghere dị otú ahụ dị ka pores. Yabụ, enwere ike ileta ajị iko dị ka ihe ọkụkụ nwere ezigbo ihe mkpuchi ikuku na njigide ụda.
Ngwunye ntutu nke centrifugal nwere mmetụta dị oke mma na njigide ụda na njikwa ụda, karịsịa nwere ezigbo nnabata na obere mkpọtụ na ụda mkpọtụ dị iche iche, nke bara uru iji belata mmetọ mkpọtụ ma melite gburugburu ebe ọrụ.
Iko ure ahụ nwere ihe mkpuchi ya na alumọn a na-enwe n’agha ọkụ na -echekwa ike dị ọkụ. Ọ bụ ezigbo ihe eji egbochi mkpuchi maka ebe a na-eme ihe ọkụkụ dị elu, ime ụlọ na-achịkwa, ebe a na-edebe igwe, ụlọ na oche dị larịị.
Nnụnụ iko na-ekpuchi ọkụ (enwere ike kpuchie ya na foil aluminom, wdg) nwere ọtụtụ uru dị ka njigharị ọkụ, ihe na-egbu egbu, nkwụghachi corrosion, njupụta dị ala, nrụpụta ọkụ dị ala, nkwụsi ike siri ike, mmiri dị ala, iji mmiri dị mma, wdg. .
Ọdịnaya dị ala nke iko slag bọọlụ na eriri dị ọcha nwere ike ijide ikuku ma gbochie ya ịgbanye. Ọ na - ekpochapụ ntụgharị ọkụ nke ikuku, na - ebelata ọkụ ọkụ nke ngwaahịa a, ma belata ngwa ngwa maka nnyefe ụda, yabụ, ọ nwere mkpuchi ọkụ dị mma, nnabata ụda na mbelata ụda mkpọtụ.
Nnukwu iko anyị nwere ezigbo ọnọdụ ọkụ, nkwụsi ike na nguzogide mmiri dị elu. Ọ nwere ike idowe nchekwa, nkwụsi ike na arụmọrụ dị elu ogologo oge n'etiti oke ọ̀rụ ahụ a na-atụ aro ya na ọnọdụ ọrụ ya.
Ihe eji egwu mmiri na-egosi ike nke ihe iji guzogide ntopute mmiri. Nnukwu iko anyị na-enweta mmiri ị nweta ihe na-erughị 98%, nke a na-eme ka ọ nwee ọrụ mmezu nke ikuku na-aga n'ihu ma kwụsie ike.
O nwere asbestos, enweghi ebu, enweghi ntọala microbial, a na-ahụkwa ya dị ka ihe na-eme gburugburu ebe obibi site na Nnwale Ulo Nchọba nke Mba.
Oge nzipu ozi: Jul-13-2020